နှလုံးသားကို Lock Down ချစရာမလိုပါဘူး – Live the Dream
နှလုံးသားကို Lock Down ချစရာမလိုပါဘူး
နေရာတကာ Lock Down ချနေကြတဲ့အခုလိုအချိန်… အားလုံးအသွားအလာဆင်ခြင်ပြီး အိမ်တွင်းအောင်းနေကြတဲ့အချိန်… အပြင်ထွက် ရတဲ့သူတွေကလည်း Social Distancing ဆိုတာကိုလိုက်နာနေကြတဲ့အချိန်… တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ခွာနေဖို့ကြိုးစားနေကြရတဲ့အချိန်မှာ နှလုံးသား ချင်းတော့ဝေးနေဖို့မလိုပါဘူးနော်။ တစ်နည်းပြောရရင် ဒါဟာနှလုံးသားကို လွတ်လပ်ခွင့်ပေးပြီး အရင်က အာရုံ မစိုက်နိုင်ခဲ့တာတွေကို အချိန်ပေးရမယ့်အခွင့်အရေးတစ်ခုပါပဲ။ နှလုံးသားရေးရာမို့ (၁၅၀၀) တစ်ခုတည်းလို့ မထင်ပါနဲ့… မိသားစု၊ သူငယ်ချင်းတွေကြားက ဖြူစင်တဲ့အချစ်တွေအားလုံးအတွက် ပြောတာပါခင်ဗျ။ ကဲ ဒါဆိုရင် Lock Down ကာလမှာ အချစ်တွေဘယ်လိုသက်သေပြမလဲဆိုတာ ကြည့်ကြည့်ရအောင်နော်။ အားလုံး အချစ်တိုးပြီး တစ်ဦးအပေါ်တစ်ဦး ပိုမိုနားလည်နိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ။
၁. ပြောပြပါ နားထောင်ပါ
အလုပ်များတတ်တဲ့ Busy Bee လေးတွေအတွက်ဆိုရင် ဒီအချက်ကအရမ်းကို အရေးကြီးပါတယ်။ ကျွန်တော့် ပုံပြင်ကိုပြောပြရရင် အရင်ကအလုပ်များတော့ မိသားစုနဲ့က စကားအဲလောက်မပြောဖြစ်ဘူး၊ အချိန်လည်း သိပ်မပေးဖြစ်ဘူး၊ ပြဿနာကြီးကြီးမားမားမရှိတော့ ကိုယ်လည်းသိပ်အာရုံမစိုက်မိဘူးလေ… တစ်ခုခုဆိုလည်း ကိုယ့်ဘာသာပဲဖြေရှင်းဖို့ ကြိုးစားတယ်၊ တစ်ယောက်တည်း တောင့်ခံတယ်… အရမ်းပင်ပန်းခဲ့တာပေါ့။ တစ်ခါတစ်လေ မိသားစုဘက်က သူတို့ပြဿနာတွေ၊ စိတ်ညစ်စရာတွေပြောပြလာရင် ကိုယ်လည်းအရမ်း စိတ်ဖိစီးရတယ်… အဲ့တုန်းကတော့ ဘာလို့ငါ့ဆီမှာမှ စိတ်ညစ်စရာတွေလာပုံနေတာလဲပေါ့၊ ငါလည်း ပင်ပန်းတာပဲ ဒါကိုနားမလည်ကြဘူးလားပေါ့။ အခုကျမှ သူတို့နဲ့ စကားများများပိုပြောဖြစ်လာတယ်၊ ကိုယ်စိတ်ညစ်ခဲ့တဲ့အရာတွေ ပင်ပန်းရတဲ့အကြောင်းတွေ ပြောပြဖြစ်တယ်… သူတို့အကြောင်းလည်း နားထောင် ပေးဖြစ်တယ်။ ဆိုတော့ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ပိုနားလည်လာတယ်၊ ပိုရင်းနှီးလာတယ်၊ ပိုနွေးထွေးလာတယ်၊ အရင်ကထက်တော့ အများကြီးအဆင်ပြေသွားတာပေါ့။
တစ်ချို့တွေထင်တတ်တာက “ငါချစ်နေရင်ပြီးတာပဲလေ၊ ဘာတွေများရေးကြီးခွင်ကျယ် လုပ်စရာလိုလို့လဲ” ဆိုတဲ့ အချက်ပါပဲ။ ချစ်နေရုံနဲ့မပြီးပါဘူး.. အားလုံးက ကိုယ့်စိတ်ကိုဖတ်နိုင်သူတွေမှ မဟုတ်တာ၊ ကိုယ်သူတို့ကို ချစ်မှန်း မချစ်မှန်း ဘယ်နားလည်ကြမလဲ။ ချစ်ခြင်းနဲ့ ဂရုစိုက်ကြင်နာမှုဆိုတာ ခွဲမရတဲ့အတွဲအစပ်တွေမို့ ကိုယ့်ဘက်ကနေ တကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်ဂရုစိုက်ကြောင်း ပြသပေးဖို့လိုပါတယ်။ ဒီလိုမှ ဪသူငါ့ကို ဂရုစိုက်တာပါလား… ငါ့ကိုတကယ်ချစ်တာပါလား ဆိုပြီးခံစားမိလာမှာပေါ့။ ဒါပေမယ့် ဂရုစိုက်မှုတွေပေးပါ ဆိုတဲ့ နေရာမှာ ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်တွေ လုပ်ပေးဖို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးနော်။ သူတို့ရဲ့စကားတွေကို သေချာ အာရုံစိုက်နားထောင်ပေးတာမျိုး၊ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် မတွေ့ရတဲ့အခုလိုအချိန်မှာ ဖုန်းမကြာမကြာ ခေါ်ပေးတာမျိုး၊ စိတ်ပူကြောင်း သတိရကြောင်း ပြောပြတာမျိုး၊ မိသားစုအတွက် ချက်ပြုတ်ပေး တာမျိုး၊ အမေ့ကိုအိမ်သန့်ရှင်းရေး ကူညီပေးတာ၊ စိတ်ပင်ပန်းနေတဲ့အချိန်မှာ နှစ်သိမ့်အားပေးတာမျိုး၊ ဒါမှမဟုတ် သူတို့ကိုချစ်ကြောင်းပြောပြတာမျိုး ဒါတွေအားလုံးက ဂရုစိုက်ခြင်းတွေပါပဲ။ လက်ဆောင်ကြီး ဝယ်ပေးမှ၊ ဘယ်လိုမျိုးတွေ လုပ်ပေးမှဆိုပြီး သတ်မှတ်ထားတာမရှိပါဘူး။ အရိုးရှင်းဆုံးနဲ့ ကိုယ့်ဂရုစိုက်မှုတွေကို ကောင်းကောင်း သက်သေပြလို့ရပါတယ်။ ဘော်ဒါတွေဆိုရင် “မင်းတို့တွေ မသေနဲ့ဦးနော်… အရှင်လတ်လတ်တွေ့ချင်သေးတယ်” ဆိုတဲ့ရွှတ်နောက်နောက်စကားမျိုးဟာလည်း ရီရပေမယ့် အရမ်းကိုချိုမြိန်နေတတ်ပါတယ်။ ဒီအချိန်မှာ မိသားစု၊ သူငယ်ချင်း၊ ချစ်သူ တစ်ယောက်အပေါ် တစ်ယောက်ထားတဲ့ သံယောဇဉ်နှောင်ကြိုးက ဘယ်လောက်ခိုင်မြဲကြောင်း ကောင်းကောင်းနားလည်လာကြတဲ့ အချိန်မို့လို့ ကိုယ်သူတို့ကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင် ဂရုစိုက်မှုတွေကို ပြသဖို့ တွန့်ဆုတ်မနေပါနဲ့နော်။
ကဲ… ပိုင်ရှင်ရှိသူများ ဒီအချိန်မှာ ချစ်သူနဲ့တွေ့ခွင့်မရတော့လို့ ရိုမန့်တစ်တွေ ဖန်တီးလို့မရတော့ဘူး မထင်ပါနဲ့။ နည်းလမ်းတွေရှိပါတယ်နော်။ အလွယ်ကူဆုံးကတော့ ဖုန်းပြောတာပဲပေါ့… အရင်ကတည်းကလည်း Online ကနေအဓိကဆက်သွယ်ကြတာပဲမဟုတ်လား။ ဒါပေမယ့်အခုက အပြင်မှာတွေ့ခွင့်မရတော့ Online ဘက်ကို ပိုအားစိုက်ရမယ်ပေါ့လေ။ ပြီးရင် အခုကအပြင်သိပ်မထွက်ရဲကြဘူး၊ စားစရာတွေလည်း မှာစားရတဲ့ အခြေအနေ မျိုးဆိုတော့ ချစ်ရတဲ့သူအတွက် သူစားချင်တာလေးတွေ Surprise လုပ်ပြီးမှာပေးလို့လည်း ရတယ်ဗျာ။ အရင်လို ပန်းစည်းကို ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ မပေးနိုင်ပေမယ့် Delivery နဲ့ပို့ပေးလိုက်ရင်လည်း သင့်ကောင်မလေး စိတ်မဆိုးမှာ သေချာပါတယ်နော်။ တစ်နေ့ဒီကပ်ဆိုးကြီး ပြီးသွားရင် ဘာလုပ်ကြမယ်၊ ဘယ်သွားကြမယ် ဆိုတဲ့ အနာဂတ်အစီအစဉ်တွေဟာလည်း ရိုမန့်တစ်တွေထဲကတစ်ခုအပါအဝင်ပါပဲ။ ရိုမန့်တစ်ဆန်မှုကတော့ ကိုယ်တီထွင်ဖန်တီးနိုင်သလောက် နည်းလမ်းပေါင်း သောင်းခြောက်ထောင်နဲ့ Online ကနေအပြတ်အသတ် ရိုလို့ရတာမို့ အချစ်တွေရှင်သန်ခိုင်မြဲမှုက ကိုယ့်လှုပ်ရှားမှုအပေါ်မူတည်ပါတယ်။
ဒါဆိုရင် ချစ်သူတွေအတွက်ပဲလား… မဟုတ်ပါဘူး မိသားစု၊ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့လည်း ရိုလို့ရပါတယ်။ မေမေ့ကို ဇက်ကြောဆွဲပေးတာမျိုး၊ ဖုန်းများများသုံးဖြစ်ကြတဲ့အခုလိုအချိန်မှာ သူငယ်ချင်းကို ဖုန်းဘေလှမ်းဖြည့်ပေး လိုက်ရင် ဘော်ဒါကြီးကတော့ ပျော်လွန်းလို့မေတ္တာတွေလှမ်းပို့နေမှာသေချာပါတယ်နော်။ ဆိုတော့ ရိုနည်း ပေါင်းစုံလည်းအလင်းပြပြီးသွားပြီ၊ ကျန်တဲ့နည်းလမ်းများကတော့ ကိုယ့်ဘာသာတီထွင် ကြံဆကြပါလေ။ အဓိကကတော့ ကိုယ်ချစ်တဲ့သူတွေနဲ့ အမြဲတမ်းအဆက်အသွယ်ရှိနေဖို့ရယ်၊ သူတို့အတွက် ကိုယ်ရှိနေတယ် ဆိုတာလေး အသိပေးဖို့ပါနော်။
၄. FA တို့ရွှေ့သင့်တဲ့အကွက်တွေ
အပြင်မထွက်ရလို့ အဆင်တွေငမ်းလို့မရတော့ဘူး၊ ရည်းစားမရဘဲ သေသွားရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ ဆိုတဲ့ အတွေးတွေကို ခေါင်းထဲကထုတ်ပစ်လိုက်ပါ။ အသုံးချတတ်ရင် အရာရာကအခွင့်အရေးပါပဲနော်။ အခုက Stay Home, Lock Down ဆိုတာကို ကျင့်သုံးနေကြတဲ့ကာလမို့ ဖုန်းကိုလည်းအရင်ကထက် ကျွန်တော်တို့ ပိုသုံးမိ ကြပါတယ်… သိတယ်နော် မညာနဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်မယ်၊ Skincare လုပ်မယ်၊ စာတွေလေ့လာမယ် လို့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေအကြီးကြီးချထားပြီး နောက်ဆုံးတော့လည်း အိပ်လိုက်၊ စားလိုက်၊ ဖုန်းလေးပွတ်လိုက်နဲ့ပဲ အချိန်တွေကုန်နေကြတယ်မလား။ အဲတော့ ဖုန်းသုံးမယ့်သုံး အကျိုးရှိအောင် သုံးရမှာပေါ့။ Crush လေးကို စကားစပြောကြည့်ပါ၊ Stay Home ဆိုတော့ ရုပ်ရှင်အကြောင်း သီချင်းအကြောင်းလေးတွေ ပြောလို့ ကောင်းပါတယ်၊ “ညီမလေး ဘာရုပ်ရှင်တွေကြိုက်လဲ” ဆိုတာကနေ “သဲရေ ရုပ်ရှင်သွားကြည့်ရအောင် ကိုယ်လက်မှတ်ဝယ်ထားပြီးပြီ” ဆိုတာမျိုးလည်း ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။
ပြီးရင် FA မတ်မတ်များ ရည်းစားကျ ရချင်တယ် စကားလာပြောရင်ကျချေမိုးနေတာမျိုးတွေ နည်းနည်းလျှော့မှဖြစ်ပါမယ်နော်။ စကားလေး ကောင်းကောင်းပြောကြည့်၊ ကိုယ့်အကြိုက် သူ့အကြိုက် ဖလှယ်ကြည့် စကားပြောရင်း အဆင်ပြေသွားတာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်. ဒါကြောင့်အပြင်ပိုင်းက ခြေနေပြီး အထဲမှာတစ်မျိုး မဖြစ်သင့်ပါဘူး။ ဒီလိုအချိန်မှာ အင်အင်တင်တင်လုပ်ပြီး မူးနေလို့ မဖြစ်ပါဘူးနော်… သဘောကျရင် စကားပြောဖို့ ကြိုးစားကြည့်ပါ။ မဟုတ်လည်း ဝါသနာအကြောင်း၊ ဂီတအကြောင်း၊ ပညာရပ်နယ်ပယ်တစ်ခုခု အကြောင်း၊ ကိုယ့်အမြင်တွေ အကြောင်းပြောကြရင်းနဲ့ ခြေလှမ်းလေးတွေ စလို့ရတာမို့ ဒီလိုအကွက်ရွှေ့ပါမှ အခြေအနေက ထူးခြားလာမှာပါ။ ပြောလို့မရဘူးလေ… အပြင်ထွက်လို့ရတဲ့အခါ ချစ်သူလေးနဲ့တွေ့ဖို့ အပြေးသွားမယ် ဆိုတာတွေ ဖြစ်ရင်ဖြစ်လာမှာပေါ့။ အဲတော့ Lock Down ကာလမှာ နှလုံးသားကို Lock Down မချဘဲ လွတ်လပ်ခွင့်လေး ပေးကြည့်လိုက်ပါလို့နော်။